Magaalada Bosaso oo si weyn looga ciiday (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Magaalada Bosaso oo si weyn looga ciiday (Sawiro)
Magaalada Bosaso oo si weyn looga ciiday (Sawiro)
June 15, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Magaalada Bosaso ee Puntland-Soomaaliya ayaa si weyn looga dabaal degay munaasabadda ciidul fidriga oo maanta ku beegan.
Kadib marii saakay uu beryay waaga, isla markaana masaajidada hal mar laga wada bilaaway takbiirta ayaa waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada is qabsaday dadweyne farabadan oo aad u labisan , isla markaana wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo reereen.
Maamulka gobalka, kan degmada, taliska qeybta booliska gobalka Bari, culimo’udiin, xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland iyo ganacsato ayaa dadweynaha kula tukaday garoonka kubadda cagta ee magaalada Bosaso.
Gudoomiyaha gobalka Bari Yuusuf Maxamad Waceys Dhedo oo khudbad ka jeediyey salaadii ciida kadib ayaa sheegay in Muslimiinta guud ahaan ay u dirayaan hambalyada Ciida, wuxuuna xusay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo yar iyo weynba amniga.
Duqa degmada Bosaso cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan oo isna ka hadlay xafladda dabaal dega ciidul fidriga ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey, iyadoo wadooyinka waaweyn e magaalada lagu arkayey ciidamo fara badan oo suga amniga magaalada